トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Rom Works
Ny pachinko milina, dia foana tsoavaly ROM. Noho izany, inona no zavatra na ny ROM, tiako mba hojerentsika ny fomba fiasan'izy. Satria ROM dia, na mamaritra ny jackpot, izay misy ny fandaharana, toy ny vokatra sy ny fampisehoana, dia milina, toy ny lalao milina ny atidoha.
pachinko milina jackpot dia naka ny loteria tanteraka rafitra izay mety amin'ny rehetra modely. (Teorika fotsiny izany. Tsy afaka mand? ny mety fa azo inoana ny lehibe hira, sns Horukon dia fiovaovan'ny arakaraka ny fivarotana.) _ X000D_
lalao rehetra ny latabatra, izay nandinika ny pachinko milina izay Hodorikyo, iharan'ny fisafoana , fa ny famerenana tanteraka fa tsy mety dia tafaray mba tsy handeha hamaky. Ny
tapa-kevitra sarobidy modely ho an'ny tsirairay, mba hamaritana avy amin'ny kisendrasendra isa, antsoina hoe mety tanteraka. Noho izany, dia mifindra ny ROM Inona no karazana rafitra, dia manazava ny fomba lehibe ho hira. Tao anatin'ireo ROM, dia manana fanisam iray toetsika amin'ny kisendrasendra. Avy eo, rehefa mahatratra ny isa sasany vidiny, namerina ihany koa fa ny fiverenana amin'ny 0.
Ao amin'ny lalao latabatra, baolina fa ny olona rehetra dia fandefasana, izay manomboka manodidina ny sary mba hiditra voalohany chucker, ao amin'ny Rom tamin'izany fotoana izany, dia tanterahina loteria, eo amin'ny famokarana sy ny tonga, na avy lavitra na namely efa efa natao raikitra.
ary amin 'ny fotoana manaraka loteria, koa manomboka hifindra hiverina 0, dia loteria amin'izao fotoana izao dia ny fanombohan'ny chucker hahavita. Ny antony dia satria izany zavatra kisendrasendra toy ny roulette izay hibebaka izy, ny mety aza 1 of 290 minitra, tsy izany foana avy manodidina mamadika ny 290 fihodinan'ny. Ao
, fa ho lehibe hira tsy mety ilaina, nefa mety mieritreritra, ROM nandritra ny fotoana, dia hiezaka ny Chikazukeyo ny jackpot, izay ho ambony ny milina. Izany, na dia mety namely isaky ny modely, dia izy converges ny lehibe hira mety.
noho izany, na misy ny fotoana, rehefa be dia matetika hira, raha tsy avy Fe-potoana I, izany hoe misy na any. Mora foana no namaritra ny fifandraisana misy eo ROM sy ny jackpot, fa pachinko milina dia, izay rehetra ao an-ROM fitantanana dia nifindra.
Vokatr'izay namely roa, loteria amin'izao fotoana, rehefa niditra ny mety hanomboka chucker Inona no tale ho avy dia faranana. Noho izany, izay hanohy ny tsara indrindra na dia ny vintana bokotra, tsy midika izay azo esorina ny hira, tsy ny asa ihany no mahazo ny ihany.
tokoa ny mamaky ny hira dia, tsy afaka na dia ny olona na iza na iza pachinko trano izy. Izany fandresena manome antoka tokoa, na heveriko fa afaka hahatakatra tsara kokoa ny tsy anao hisambotra am-boalohany.
Pachinko, ny zavatra tiantsika dia filokana, na ireo izay manao tsara kokoa ny raharaham-barotra. Izany ihany no atao, mamaky ny onjam-hira ny ROM, ny tsy momba ny zava-misy izay miezaka namely izany no zava-misy.
Na izany aza, anisan'ny Pachinka mety ho tsy izany, fara fahakeliny, hahazo iray volana ny 1 tapitrisa yen.